Abaduni bahlasela abasebenzi bezempilo | Scrolla Izindaba
Abaduni bahlasela abasebenzi bezempilo
Akwanele ukuthi abasebenzi bezempilo abaphambili eNelson Mandela Bay babeka impilo yabo engcupheni nsuku zonke futhi babhekane nobuhlungu beziguli eziningi ezishonayo.
Abaphangi nabaduni banezele osizini ngokuhlasela abasebenzi bezempilo abasiza kwi-Covid eMpumalanga yeKapa.
Lokhu kuhlasela kuqale ngemuva kokuqubuka kwesifo i-Covid-19, ngesikhathi ithimba lokuhlola nalelo elilandela umkhondo libanjwa inkunzi futhi ladunwa.
Kwezinye izindawo, amaphoyisa abizelwe ukuzohambisa izithuthi zeziguli emalokishini, ukuwavikela ekuhlaselweni ngodlame.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo esifundazweni, uSiyanda Manana uthe, kube nezigameko KwaZakhele nase-New Brighton ngesikhathi kuqubuka lesi sifo.
“Imoto yethimba lethu lokuhlola, nokulandelela i-Covid-19 idunwe KwaZakhele kwathi ngemuva kwesikhathi yatholwa isuswe ithayi. Kwaqhuma nesibhamu.”
“NgoNhlangulana abasebenzi babanjwa inkunzi nelungu elilodwa lagwazwa esifubeni. Mhla zingama-27 kuMfumfu elinye ithimba labanjwa lakhonjwa ngesibhamu e-New Brighton.”
UManana uthe, kusaqhubeka nokuhlaselwa izithuthi zeziguli, abasebenzi baphucwa omakhalekhukhwini nezikhwama zemali.
“Imisebenzi yethu iyathinteka ngoba kufanele sicele amaphoyisa ukuthi asiphelezele. Kodwa kwesinye isikhathi abasebenzi bethu bazibeka engcupheni futhi bahambele izimo eziphuthumayo bebodwa,” kusho uSiyanda.
UNgqongqoshe wezeMpilo eMpumalanga yeKapa, uSindiswa Gomba, usecele izakhamuzi zaseNelson Mandela Bay ukuthi zisebenzisane namaphoyisa ukulwa nalokhu kuhlaselwa kwabasebenzi bezempilo.
Njengoba ukuhlaselwa kukhuphukile kulesi sikhathi salolu bhubhane, akusikho okokuqala ukuthi kuhlaselwe abasebenzi bezempilo. Ngonyaka odlule abashayeli bezithuthi zeziguli bathi kusukela ngowezi-2015 cishe izithuthi zeziguli ezingama-20 zazibanjwa inkunzi KwaZakhele nase-New Brighton njalo ngonyaka.